Ecommerce bulshada cidna?
Jimco, Juun 8, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Iyada oo dad badani ay kuxirantahay shabakadaha bulshada iyo baloogyada loogu talagalay wararka iyo cusbooneysiinta, diiradda ayaa ah kaqeyb galinta macaamiisha iyo macaamiisha mustaqbalka iyadoo loo marayo warbaahinta bulshada. Si kastaba ha noqotee, shirkadaha, ka-qaybgalka noocan oo kale ah ama dadaallada dhismaha ayaa weli ah jimicsi aan faa'iido lahayn haddii aysan ugu dambeyntii u turjumin dakhliyada lagu daray.
Ku qor Dayaxa, oo ah meheradii ugu horreysay ee ganacsi ee bulshada loo qaybin karo, taasoo u oggolaanaysa shirkadaha inay dadka la macaamilaan iyadoo loo marayo warbaahinta bulshada, loo qaybiyey bogagga xiriirka la leh iyo shabakadaha xayeysiiska ah, isla markaana lacag laga dhigto ka qayb qaadashada noocan oo kale ah isla waqtigaas.
Moontoast wuxuu leeyahay 3 Bixin Waxsoosaar ah (Sharaxaada waxay ka socdaan degelkooda):
Bakhaarka loo qaybiyey - Bakhaarka loo qaybiyey ee Moontoast waa goob bakhaar ah oo lagu dari karo degel kasta isla markaana lala wadaagi karo shabakadaha bulshada iyo iimaylka. Waxaan u dhisnay Bakhaarka loo qaybiyey si aan ugu oggolaano noocyada, muusikiistayaasha, daabacayaasha, iyo dadka caanka ah inay ballaariyaan gaadhista eCommerce iyagoo si toos ah u qaadanaya dalabyo ay u fidinayaan bulshadooda. Dhammaan khibradaha wax iibsiga iyo macaamil-ganacsi waxay ka kooban yihiin dukaanka dhexdiisa, taasoo ka dhigaysa habka iibsiga si deg deg ah oo fudud.
Rabitaanka Moontoast - Moontoast Impulse waa codsi Facebook u oggolaanaya taageerayaasha inay ciyaaraan, wadaagaan, oo ay muusig ka iibsadaan isla bogga taageerayaasha Facebook. App-kan waxaa dhiirrigeliyay Moontoast oo ku guuleystay Bakhaar lagu qaybiyo oo farshaxanno sida Taylor Swift iyo Reba ay u adeegsadeen kordhinta iibka internetka. Iyadoo la adeegsanayo 'Moontoast Impulse' waxaan sameynay qalab isku mid ah oo weyn oo ay heli karaan dhamaan farshaxan-yahannadu. Waa caqli, awood badan, xalka ganacsiga bulshada ee DIY.
Falanqaynta Dayaxa - Falanqaynta 'Moontoast Analytics' waa qaab muuqaal adag - oo aan laga heli karin meherad kasta oo kale oo ganacsiga bulshada ah - taas oo kaa siinaysa qarka u saaran suuqa. Laga soo bilaabo aragtida indhaha shimbiraha ee isbeddellada guud iyo qaababka illaa aragti faahfaahsan oo ku saabsan sida saxda ah alaabada iyo baakadaha ay iibinayaan kuwa ugu fiican, xogtaan waxay bixineysaa aragtiyo muhiim ah oo kaa caawin doona inaad turxaan bixisid isla markaana aad u hagaajisid waxyaabaha aad soo bandhigeyso - iyaga oo ka dhigaya kuwo aad loo jecel yahay, lala wadaagi karo, oo faa'iido badan laga heli karo. Falanqaynta Moontoast waxay mala-awaalka ka qaadaysaa qeexitaanka noocyada dalabyada ee aadka u jecel dhagaystayaashaada.
Bakhaarka loo qaybiyey ee Moontoast waa aalad u oggolaanaysa noocyada inay abuuri karaan oo ku qaybin karaan dukaamada internetka ee shabakadaha bulshada, baloogyada, shabakadaha xayeysiiska iyo boggaga xiriirka la leh. Laakiin maxaa ka dhigaya in badeecadani ay ka soocnaato boqollaalka alaabooyinka kale ee lamidka ah maxay tahay suuq camiran? Jawaabtu waxay ku jirtaa xulashooyinka dukaamaysiga casriga ah.
Marka laga reebo heerka caadiga ah ee Dukaanka Bulshada ee lagu dhejin karo degel kasta, Dukaanka 'PopUp Store' oo ku habboon bogagga degitaanka iyo boorarka xayeysiinta, ayaa u tarjumaya waxa haddii kale noqon kara xayeysiis kale oo soo-baxa ah, kaarka wax lagu iibsado. Bakhaarka Xayeysiiska sidoo kale wuxuu u beddelaa cutubka xayeysiiska gaadhigii wax iibsiga. Fursadaha noocan oo kale ah waxay siiyaan khibrada ugu fiican macaamiisha maaddaama kuwani aysan carqaladeynin howlahooda daalacashada ama aysan ku dhex milmin howlahooda wax iibsiga.
Qalabka Falanqaynta Bulshada ee loo yaqaan 'Moontoast Analytics Tool' ayaa ah qalab ku habboon oo lagu kabo noocyada bakhaarrada noocaas ah. Qalabkan, suuqleyda waxay ka helaan aragtiyo qiimo leh hab dhaqanka macaamiisha, si loo wanaajiyo dalabyada isla markaana looga dhigo mid aan laga hor imaan karin macaamilka la bartilmaameedsaday. Sidoo kale, qalabku wuxuu fududeeyaa raadinta kaqeybgalka iyo macaamillada, si loo raadiyo qaababka iyo isbeddellada, u oggolaanaya astaanta inay ahaato waqtiga saxda ah iyo goobta leh dalab sax ah. Qalabku wuxuu gacan ka geysanayaa cabirka isdhexgalka bulshada, u doodista iyo dakhliga si wada jir ah waxayna ka caawineysaa sumadda inay qiimeyso ROF ama Returns ka taageerayaasha.
Tags: Bakhaarka loo qaybiyeydayaxaFalanqaynta DayaxaRabitaanka Moontoastfalanqaynta bulshadaganacsiga bulshadafalanqaynta ecommerce bulshada